I-SpeechMaker ye-iOS | Plum Amazing
Okusheshayo: 10 / 24 / 18
SpeechMaker - Dala, Prakthiza, Qopha (Umsindo, Ividiyo), Yizwa, Faka kungobo yomlando futhi unikeze izinkulumo ezinhle
Uhlelo lokusebenza oluguqula i-iPhone yakho noma i-iPad ibe yipulatifomu yeselula, umbhali wenkulumo, i-proprompter pro, irekhoda yevidiyo, isibali sikhathi nokugcina umlando kokukhuluma emphakathini. Diliva imigqa yakho ngokungenaphutha nangesikhathi. Gcina wonke amanothi akho, izinkulumo, udlala endaweni eyodwa. Gcina umkhondo futhi ukhulume izinkulumo, izinkondlo, izinkulumo, imidlalo, izintshumayelo, izindawo zokuqalisa kanye namahlaya. Kuhle kakhulu kuma-toastmasters, abafundi, abafundisi, izimbongi, abalingisi, abaqondisi, ama-podcasters nabaculi. Ilungele noma ngubani okhuluma nomphakathi.
"Uhlelo lokusebenza olunenani eliphansi le-SpeechMaker lusiza abasebenzisi ukuthi benze, bahlole, bazilolonge, barekhode, futhi benze izinkulumo zesikhathi. Kufaka iqoqo elikhulu lezinkulumo ezidumile, kodwa okubaluleke kakhulu, amathuluzi okudala nokuletha owakho ngendlela yobungcweti." - UGraham K. Rodgers, Buyekeza kuma-eXtensions, 8/30/17
Dala, Zijwayeze, Uzwe, Ugcine kungobo yomlando futhi unikeze Izinkulumo - Isikhulumi sikwenza isoftware yokwenza i-iPhone / iPad noma idivayisi ye-Android yakho ibe yipulatifomu yeselula, incwadi yokubhalela, ingobo yomlando yezinkulumo kanye ne-teleprompter yobungcweti yokukhuluma emphakathini.Buyekeza kuma-eXtensions nguGraham K. Rodgers 8/30/17* Kudunyiswe i-CNN ne-Top Education App ka-2013 *Yilande kusuka esitolo se-Apple iTunes App.Ngaphezu kwezinkulumo ingasetshenziselwa ukubamba nokufunda izinkondlo, amagama ezinhlamvu, imibhalo, amahlaya, izinkulumo, izintshumayelo, kanye/noma nemidlalo.Bheka ukubuyekezwa kwevidiyo kokuthi I-Daily App ShowManje usungazijwayeza futhi uzwe ukuthi uzwakala kanjani ngaphambi kokuba unikeze leyo nkulumo ebalulekile noma uhambise imigqa emdlalweni noma ufunde inkondlo noma unikeze inkulumo. Thola umuzwa we-cadence nokugeleza kwenkulumo yakho.Ibhukwana / UsizoI-SpeechMaker ithandwa kakhulu ngabafundi, othisha, osopolitiki, izimbongi, abafundisi, ongqongqoshe, ababhali, ababhali bemidlalo, ababhali bezinkulumo, ababhali bescript, o-toastmaster, osomahlaya, abaculi nabalingisi. I-SpeechMaker inikeza zonke izinhlobo zezikhulumi yonke into edingekayo ukuze kudalwe, ukuzijwayeza, ukuzwa nokunikeza izinkulumo.Ingagcina kungobo yomlando izinkulungwane zezinkulumo ngolwazi olwengeziwe njengesihloko, umbhali, idethi nomsindo orekhodiwe. I-SpeechMaker iza nenani lezinkulumo ezidumile ezakhelwe ngaphakathi.
Faka kungobo yomlando izinkulumo ezinhle kakhulu emlandweni. Funda kumakhosi.
Dala inkulumo yakho noma uyingenise njengombhalo, i-RTF noma i-PDF usebenzisa i-Dropbox noma i-Google Docs.
Guqula umbhalo ukhulunywe ngokuzwakalayo usebenzisa iSiri ngezilimi ezihlukene ezingama-36. Thola ukunambitheka okusheshayo kokuthi inkulumo yakho izwakala kanjani.
Prakthiza inkulumo yakho bese urekhoda umsindo. Lalela okurekhodwayo njengempendulo yokuthuthukisa inkulumo yakho, isikhathi nokusebenza kwakho.
Zijwayeze ukuhambisa imigqa yakho ngokungenaphutha, sebenzisa isibuko ne-SpeechMaker.
Nikeza inkulumo yakho usebenzisa i-autoscroll elula ukuguquguquka kalula. Bona ngokusobala ukupheqa kwenkulumo ngokukhetha kwakho ifonti, usayizi nombala wangemuva. Bona isikhathi, isikhathi esedlule nesikhathi sokuya enkulumweni yonke shazi.
Faka kungobo yomlando inkulumo yakho njengombhalo nomsindo ukukusiza ukuthi uqhubeke uthuthuke. Faka kungobo yomlando ngezinhloso zomlando.
Yabelana ngenkulumo yakho nabangani, osebenza nabo kanye ne-Facebook.
I-SpeechMaker inamandla kakhulu lapho kubiza ama-teleprompters abizayo.Izici ze-SpeechMaker
Uhlelo lokusebenza oluhle lokufundisa lokukhuluma emphakathini kanye nohlelo lolimi.
Isebenza kuzo zombili i-iOS ne-Android.
I-UI enhle nemidwebo eyisicaba ye-iOS 7.
Ngenisa umbhalo, i-rtf, ne-pdf ngeDropBox, i-Google Drayivu, ne-Copy and Namathisela kanye nokwabelana ngefayela le-iTunes.
Thumela umbhalo wenkulumo nge-imeyili.
Ngenisa futhi uthumele umsindo ngeDropbox.
Ukuqoshwa komsindo kukuvumela ukuthi uthole impendulo njengoba uqhuba inkulumo yakho.
Njenge-autprompter autoscroll inkulumo yakho ngejubane elifanele nje.
Yizwa idivaysi ehlakaniphile ikhulumela phezulu inkulumo njengoba iskrola futhi igqamisa umugqa ngamunye.
Khetha kolunye lwezilimi ezihlukene ezingama-36 namaphimbo weSiri.
Ngokuqhafaza kwenkinobho bheka izenzo, amabizo, iziphawulo nezinye izingxenye zenkulumo ezigqanyiswe ngemibala ehlukene.
Lawula ukubukeka kwedokhumenti ngokushintsha, umbala ongemuva, amafonti, isivinini sokuskrola, usayizi wefonti.
Izinkinobho nezenzo zokuqala ukuqala, ukumisa nokulawula isivinini sokuskrola.
phusha noma usondeze ukushintsha usayizi wefonti
bamba bese uhambisa ngokushesha kunoma iyiphi ingxenye yenkulumo
thepha uhlangothi olungakwesokudla ukusheshisa ukuskrola. thepha ohlangothini lwesobunxele ukushesha ukuphenya.
Ngesikhathi sokubheka imibukiso yenkulumo, esidlulile, isikhathi esisele, esilinganisiwe.
Khombisa kuma-Apple TV axhunyiwe ama-HD eziteshini ze-TV, ama-studios, amahholo, ama-podcasters, amahholo ezifundo nemidlalo.
Funda, lungisa, nika, dlala futhi urekhode izinkulumo noma nini nanoma kuphi. Asikho isidingo sokuncika kumanothi kuma-napkins noma amakhadi enkomba.Gcina izinkulumo zakho ngaso sonke isikhathi, zivikelekile futhi zitholakala ukuze uzisebenzise noma nini. Shintsha kalula futhi unikeze izinkulumo ngomzuzu wokugcina.Abasebenzisi Rave“Ukuphatha zonke izinkulumo zami ngedivayisi eyodwa elula futhi elula ukuyisebenzisa kusindisa ingqondo yami. I-SpeechMaker kulula ukuthi ngiyisebenzise futhi ngiyathanda ukuthi ngingazilawula kanjani zonke izici zendlela ebukeka ngayo esikrinini. Ngaphambi kokuthi ngibuze umkami ukuthi le nkulumo izwakala kanjani, manje sengiyayiqopha inkulumo ngize ngiyithole kahle bese ngibuza umkami ukuthi ucabangani. ISpeechMaker yinto enhle kunazo zonke engenzeka kulobu buciko basendulo eminyakeni eyikhulu. ”
Ngenhla kwesethi yezilungiselelo ze-Siri izwi, iphimbo, ivolumu nesivinini. Ngakwesokudla ukuthi ungaziqokomisa kanjani izingxenye zenkulumo.
Izilimi Zamazwe Omhlaba
Isekela zonke izilimi, kwesokudla nesobunxele kuye kwesokudla nezinhlamvu ezikhethekile.
Kulula ukubuka isibonakaliso sesikhathi sangempela, esidlulile, esilinganisiwe nesisele.
Iya kunoma iyiphi ingxenye yenkulumo.
Shintsha usayizi wefonti ngokushesha kumodi ebukhoma noma yokuhlela.
Hlela umbhalo wenkulumo bese ushintsha ifonti, usayizi, njll.
Iza nezinkulumo ezithile ezidumile. Faka kungobo yomlando izinkulumo zakho.
Isoftware ibala phansi ngezinombolo nemibala kuze kufike ekuqaleni.
Ungazitholela i-iPhone / iPad ne-Android
I-SpeechMaker ifana neplatifomu yeselula. I-teleprompter nazo zonke izinkulumo zakho.
Lawula umqulu othomathikhi ngokuthepha ukusheshisa noma ukwehlisa ijubane.
Dlala izinkulumo ezidumile noma urekhode okwakho.
Sebenzisa i-SIRI ukuzwa inkulumo ngevolumu eguquguqukayo, iphimbo nejubane ngezilimi ezingama-36.
Shintsha ifonti yenkulumo kumodi yokuhlela.
Kungani Usebenzisa i-Teleprompter?
Ama-Teleprompters avumela noma ngubani ukuthi abukeke njengehange lezindaba. Zenzelwe ukuvumela ihange, ithalente noma umongameli ukuthi abheke ngqo kukhamera, afunde umbhalo wokuskrola futhi axhumane nezethameli. Ngezansi kunjengokuthi i-teleprompter yanamuhla ibukeka kanjani. Ukuba ne-teleprompter ezinhlangothini ezimbili kuvumela umengameli ukuthi abone inkulumo futhi axhumane nabantu phambi kwakhe ezinhlangothini zombili.
Uyazi ngokushesha ividiyo engeyona eyomsebenzi uma ubona umuntu ebheke ohlangothini olulodwa lwekhamera, ibukeka ingekhona okwemvelo. Abakhulumi nawe ngqo. Akubambi ukunaka kwakho njengokubuka umuntu emehlweni. Uyazi uma umuntu ethi 'sekuphelile ngezibuko' usuke ebhekise kolunye uhlobo lomlingo. Ama-teleprompters angumlingo osuselwe esibukweni sendlela eyodwa njengasemibukisweni yobugebengu. Kulokhu ikhamera ithwebula ngesibuko sendlela eyodwa ohlangothini olulodwa kanti kolunye umbhalo uboniswa kumfundi.Yisa izinkulumo zakho kwelinye izinga.Ama-teleprompters abiza kakhulu futhi makhulu kakhulu. Okamongameli izinkulungwane eziningi zamaRandi futhi iningi lingama-$500+ futhi ikakhulukazi isibuko sendlela eyodwa. Ngenhlanhla, manje, KUNEZINKULU zokwenza amaphrojekthi akhona afana nalawa. lokhu ukwenza i-hardware kanye ne-SpeechMaker evumela noma ubani ukuba abe ne-teleprompter yomuntu siqu elula, eshibhile futhi engcono kunanoma yini eyayikhona ngaphambili.Ngenhlanhla enkulu manje sekunama-iPhone, ama-iPads, i-Android namanye amaphilisi akuvumela ukuthi uphathe futhi usebenzise i-SpeechMaker njengowakho siqu. teleprompter software noma nini nanoma kuphi.
Amathiphu Wokuthambisa i-Teleprompter evela ku-ToastMasters
Ukufunda kahle i-teleprompter akuvamile ukuthi kubelula njengoba kubukeka, futhi kulula ukubukeka uqinile noma ungathembekile ngaphandle kokusebenzisa inqubo efanele. Umqeqeshi wamaphrezentheshini-amakhono uLaurie Brown unikeza lawa macebiso okusebenzisa ngobuciko i-teleprompter:
Hola ijubane lokuhamba. Isivinini sakho sokufunda kufanele silawule ijubane lomqulu. Uma i-prompter opharetha ihola, phumula ukuze ubavumele ukuthi behlise ijubane noma basheshise.
Ungahambisi ikhanda lakho ngapha nangapha njengoba ufunda. Uma uzithola wenza lokhu, kungenzeka ukuthi usayizi wefonti wesikripthi ku-prompter akulungile futhi imisho mide kakhulu.
Khuluma ngokwemvelo. Musa ukuvele ufunde okuqukethwe okuskrola. Faka ukungenelela okuncane noma ama-ad-libs lapho kuzwakala kungokwemvelo khona, futhi wazise opharetha wakho ngaphambili ukuthi uzokwenza kanjalo. Uma ufuna ukusebenzisa izindaba zomuntu siqu, zitshele ngekhanda - ungazifundi ngokwezwi nezwi kusuka kusikripthi. anchorman1.jpg
Hlola oxhumana naye wamehlo kusiqapha. Qiniseka ukuthi ufunda maphakathi kwesikrini. Uma ufunda phezulu kakhulu, kungakwenza ubukeke uzithobile kubabukeli, nekhala lakho liphezulu emoyeni. Uma ufunda uphansi kakhulu noma ubheka phansi, kungakwenza ubukeke uthukuthele.
Ungagqizi. Phefumula futhi ucwayize ngokwemvelo. Ungesabi ukubheka kude nokuhamba kwesinye isikhathi - kukusiza ukuthi ubukeke sengathi ucabanga esikhundleni sokufunda.
Bheka i-teleprompter njengomuntu. Cabanga ngomuntu omthanda impela ngemuva kwamagama, lokhu kuzokusiza wenze izwi lakho libe nokwenzeka nasebusweni.
Sebenzela ukuhlala uthule. "Ukuthula kwikhamera kubalulekile," kusho uBrown. “Akusho ukuthi unenkani noma awunazimvakalelo, kodwa ukuthi umzimba wakho ophezulu uhlala umile.” Izipikha zinokuthambekela kokungena nokuphuma zibheke kwikhamera, "ebukeka njengebhayisikobho embi ye-3-D," esho.
Ngaphezu kwakho konke, zivivinye ngokuqinile futhi ufake okuqukethwe kwakho ngaphakathi. Izipikha eziningi zicabanga ukuthi zingakwazi ukusebenzisa kahle ukusebenzisa umkhuba omncane noma zingazijwayezi ukuzama ukuzama ukwenza iphiko ngokuvamile kusho inhlekelele Futhi, qiniseka ukuzilolonga ngokuzwakalayo, ngoba amagama azwakala ehlukile ekhanda lakho kunalokho akwenzayo uma kukhulunywa. Zijwayeze no-opharetha wakho ukuze noma azi ijubane lakho lokukhuluma.
Amathiphu amaningi wokukhuluma esidlangalaleni
Bhala futhi usazise amathiphu akho owathandayo okukhuluma.
4 ABAHOLI BOKUJWAYELELA NGOKUVAMILE KWABAHOLI BENZA.
- Manje ingasusa zonke izinkulumo zomlando
- Ukuthuthuka kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi
Udaba lwe -dropbox lwabanye abasebenzisi abalungisiwe
Uhlobo lokubhalisa olwenziwe
- Inketho yokuthi uSiri akhulume ngesipikha noma umamukeli ku-iPhone.
Ngiyabonga. Sicela ugcine iziphakamiso ziza.
[fixed] umugqa wokugcina ekubonisweni wawumboziwe kancane.
Siyabonga ngempendulo enhle! Sicela ugcine iziphakamiso ziza.
- Qopha ividiyo kanye / noma umsindo wenkulumo yakho, intshumayelo, ingoma, inkondlo, umculo, njll.
- ui ushintsha ividiyo, ui ushintsha i-siri, izinguquko eziningi ze-ui
- ukusesha i-database engu-1000 + yezinkulumo ezidumile zomhlaba kuyashesha futhi kube lula.
- isebenza ngenguqulo yakamuva ye-dropbox.
- inguqulo yokuqala.
- [New] ukuma kwe-Portrait kwamathebulethi kuyasekelwa
- [Isiphazamisi] Ngenkathi kushintshwa izilungiselelo zenkulumo (ama) ze-TTS, isivinini sephimbo nezindlela zokulawula ivolumu bezingabonakali kwamanye amadivayisi
- [I-Bug] TTS ibingasebenzi kuthebhulethi ye-Samsung Glaxy Tab 4, 7 "uma kungenzeka kukhethwe injini ye-Google Text-to-Speech.
- inguqulo entsha enkulu!
- Qopha ividiyo kanye / noma umsindo womculo wakho, inkulumo, intshumayelo, njll.
- ukusesha i-database engu-1000 + yezinkulumo kuyashesha futhi kulula ukuyisebenzisa.
- Ukufinyelela kwe-drobox kuvuselelwe.
- Izinguquko eziningi nokwenza kahle.
- manje usengafunda amafayela e-PDF kusuka ku-google drive. isivele ifunda ama-PDF kuDropBox
- izinguquko esibonakalayo
- ihlanganiselwe i-xcode yakamuva
- ushintsho lwamagama amancane
- Izinguquko ezenziwa ngesandla
- Izinkulumo eziyi-1000 + ezingeziwe zifaka phakathi usesho.
- manje isebenza njenge-teleprompter enezinketho eziningi zobuchwepheshe kubandakanya i-bluetooth, ukulawula ngenye idivayisi ye-ios, isibuko, njll.
- Ukulawulwa kwe-bluetooth kokupheqa kusuka kwenye idivayisi ye-ios.
- Ukuthuthuka ku-ui
- manje sisebenzisa i-ios eyakhelwe ngamazwi enkulumo
- Ukuthuthukiswa kwejubane
- ihlanganiswe ne-xcode 7.3 yakamuva
- Ibhokisi lokudonsa elingaguquki
- ezinye izinguquko eziningi
- iziphakamiso zakho zibalulekile kithi. sicela uthumele impendulo yakho nge-imeyili.
- Izinguquko ezinkulu.
- manje isebenza ku-iPhone kanye ne-iPad
- isebenzisa ama-apula umbhalo wakamuva ukukhuluma kuwo wonke amazwi nezilimi ezingama-36.
- ukulawula okwengeziwe kwegama lokukhuluma.
- Ivuselelwe yaba ihluzo ezinhle ze-ios7 kuzo zombili i-iPhone ne-iPad.
- ihlanganiswe ne-x-code yakamuva.
- ukulungiswa okuningi.
- Ukuxhumeka kwe-google ne-dropbox, ukungenisa / ukuthekelisa kuvuselelwe.
- Amafomethi we-rtf ne-pdf manje asekelwayo.
- Manje isekela ukwakheka kwezwe nokwakheka ngobude.
- ibhukwana libuyekeziwe.
- Sibonga bonke abasebenzisi. ngicela ugcine iziphakamiso ziza.
- manje ukhombisa izingxenye zenkulumo. inkinobho engakwesokudla kwe-GR (yohlelo lolimi) ikhombisa amabizo, izenzi, njll. okugqanyiswe ngemibala ehlukene.
- Kungezwe ilebula yesikhathi sokukhuluma. isikhathi = words_count / 2.72.
- Ukuphahlazeka okungaguquki ekushintsheni kwesikhathi sokukhuluma
- amahora angeziwe ekukhetheni isikhathi sokukhuluma
- izimbungulu ezihleliwe ngokujikeleza
- iwindi lezinkulumo likhulisiwe ukulungisa ukubuka kwezakhiwo ze-speeche
- I-bug elungisiwe ngewindi losizo
- besingacindezela inkinobho 'ye-autoscroll' kuphela emaphethelweni. manje asisenzi.
- okurekhodiwe ukudlala logic kulungisiwe
- izindlela ezibukhoma ezisebenzayo nezisebenza ngokuqoshwa kwewindi manje sezizimele komunye nomunye
- ezinye izingqinamba ezincane
Usizo Lomenzi Wokukhuluma
Dala, Zijwayeze, Uzwe, Ugcine kungobo yomlando futhi unikeze Izinkulumo - Isikhulumi sikwenza isoftware yokwenza i-iPhone / iPad noma idivayisi ye-Android yakho ibe yipulatifomu yeselula, incwadi yokubhalela, ingobo yomlando yezinkulumo kanye ne-teleprompter yobungcweti yokukhuluma emphakathini.
Ngaphezu kwezinkulumo zisebenzisele ukubamba, ukuzijwayeza nokufunda izinkondlo, izingoma, imibhalo, amahlaya, izinkulumo, izintshumayelo, imidlalo, njll.
I-SpeechMaker ithandwa kakhulu ngabafundi, othisha, osopolitiki, abaqondisi, izimbongi, abafundisi, ongqongqoshe, ababhali, ababhali bemidlalo, ababhali bezinkulumo, ababhali bezincwadi, osomaqhinga, osomahlaya, abaculi nabalingisi. I-SpeechMaker inika zonke izinhlobo zama-orator konke okudingekayo ukudala, ukuzijwayeza, ukuzwa nokunikeza izinkulumo.
Bona futhi uzwe ukuthi uzwakala kanjani ngaphambi kokuletha leyo nkulumo ebalulekile ngokusebenzisa ukuqoshwa komsindo noma kwevidiyo. Thola umuzwa we-cadence nokugeleza kwenkulumo yakho, inkondlo, isifundo, njll.
Sesha amagama angukhiye bese uthola izinkulumo ku-database eyakhelwe ezinkulungwaneni zezinkulumo ezidumile. I-SpeechMaker iza nezinkulumo eziyi-1000 + futhi ingafaka kungobo yomlando okuningi okungafaka imininingwane eyengeziwe efana nesihloko, umbhali, usuku nokuqoshwa komsindo / kwevidiyo.
Umenzi Wenkulumo Izici
Thenga kanye ukugijima kuzo zombili i-iPhone / iPad noma i-Android phone / tablet.
Thenga kanye bese wonke umndeni wakho ungabelana ngayo usebenzisa i-Apple's Family Share.
I-UI enhle nemidwebo eyisicaba ye-iOS 7 ne-Android
Shayela inkulumo yakho kuSiri ukuthi angene ngqo ku-Speechmaker.
Khuluma ngokuzwakalayo inketho yokusebenzisa amazwi ka-Siri, ubulili, ulimi futhi ngasikhathi sinye ubone umugqa ngamunye wenkulumo uqokonyiswe njengowokuzenzakalelayo.
Ngenisa umbhalo, i-rtf, ne-pdf ngeDropBox, i-Google Drayivu, ne-Copy and Paste.
Ngenisa futhi uthumele umsindo nevidiyo ngeDropbox neGoogle Drayivu
Ukurekhodwa komsindo / kwevidiyo kukuvumela ukuthi uthole impendulo njengoba uqhuba inkulumo yakho.
Sebenzisa njenge-teleprompter ukulawula, skrola ngokuzenzakalela inkulumo yakho nephrojekthi kuzikrini ezinkulu.
Khetha kolunye lwezilimi ezihlukene ezingama-36 namaphimbo weSiri
Ngokuswayipha kwenkinobho bheka izenzo, amabizo, iziphawulo nezinye izingxenye zenkulumo ezigqanyiswe ngemibala ehlukene
Lawula ukubukeka kwedokhumenti ngokushintsha, umbala ongemuva, amafonti, isivinini sokuskrola, usayizi, njll.
Izinkinobho nezenzo zokuqala ukuqala, ukumisa nokulawula isivinini sokuskrola
+ thepha uhlangothi olungakwesokudla ukusheshisa ukuskrola. thepha ohlangothini lwesobunxele ukusheshisa ukuskrola
Ngokubheka isikhathi senkulumo kukhombisa isikhathi esidlulile, isikhathi esisele nesikhathi esilinganisiwe.
Funda, lungisa, nika, dlala futhi urekhode izinkulumo noma nini nanoma kuphi. Akunasidingo sokuncika kumanothi kuma-napkins noma kumakhadi wezinkomba.
Gcina izinkulumo zakho nawe ngaso sonke isikhathi, zivikelekile futhi zitholakala ongazisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi. Shintsha kalula futhi unikeze izinkulumo ngomzuzu wokugcina.
Ngezansi isithombe-skrini se-SpeechMaker. Isebenza kumodi ye-portrait ne-landscape kuzo zombili i-iPhone ne-iPad. It has 2 ongakhetha main, ungangena noma Live Mode noma Hlela Mode.
Imodi Ebukhoma yokunikeza Izinkulumo noma Imodi Yokuhlela ukuhlela izinkulumo. Zonke izici / izilungiselelo ezahlukahlukene zingatholakala ngaphansi kokunye noma okunye.
Lezi zindlela ezimbili, Hlela ne-Live, ziyisihluthulelo sokusebenza ne-SpeechMaker. Uzozithola ushintshela emuva naphambili ngokuthepha okukodwa noma okunye.
Shaya inkinobho ebukhoma ukuze unikeze inkulumo yangempela noma yokuzijwayeza. Kumodi ebukhoma bona izibali sikhathi futhi ukwazi ukwenza i-Autoscroll, Qopha umsindo noma ividiyo noma uzwe inkulumo ekhulunywa ngokuzwakalayo nguSiri.
Thepha inkinobho Hlela ukuhlela inkulumo, shintsha ifonti, usayizi, izwi, njll. Futhi ushintshe izilungiselelo ezahlukahlukene ezizenzakalelayo.
Thepha inkinobho ebukhoma lapho ufuna ukunikeza inkulumo. Kubha yokuzula engezansi uzobona lezi zinkinobho kusuka kwesobunxele. Umbhangqwana wokuqala ngu-Hlela / Bukhoma. Lapho eyodwa ikwelinye icishiwe.
Lapho i-Live ikhethiwe uzobona lezi zinkinobho kubha engezansi ye-nav:
Hlela - le nkinobho ayikhethiwe. Ukuthepha kukuthatha kumodi yokuhlela. Ukuhlela kuvumela ukuhlela zonke izinhlobo zezwi lezwi, ifonti, usayizi, ingemuva, njll.
Live - lokhu kufanele kube inkinobho ekhethwe njengamanje uma ungayithinti ikusa ku-Live Mode. I-Live ifana nesibonisi se-headup sokunikeza inkulumo. Isilinganiso phezulu.
Siri - ukukhetha lokhu kuqala ukugqamisa imigqa yombhalo nokukhuluma ngokuzwakalayo inkulumo ekhethwe manje. USiri uzobala phansi aqale phansi.
Ukuvuselela - Okufushane kokurekhoda kukunika ukukhetha kokuqoshwa komsindo noma kwevidiyo.
I-Autoscroll - iphenya ngokuzenzakalela inkulumo ngejubane elithile.
ISU: Shintsha ijubane lokuhambisa ngesandla ngokuthepha noma yikuphi ohlangothini lwesobunxele ukuze uhambe kancane futhi ngasohlangothini lwesokudla ngokushesha.
Kumodi ebukhoma 'Izikhathi ezibukhoma' zizovela kubha ephezulu ye-nav. Kusukela kwesobunxele imibukiso yokuqala 'Isikhathi Esilinganisiwe'. Ngokuzayo 'Isikhathi Esidlulile' kanye nakwesokudla phezulu 'Isikhathi Esisele'.
Uma ukhetha ukuhlela imodi ubona ibha engezansi ye-nav (ngenhla).
Lapho unokukhetha futhi kokuHlela noma Okubukhoma, Hlela Inkulumo nesithonjana esibukeka njengemigqa emi-3 evundlile ivula imenyu eseceleni ebukeka kanjena (ngezansi) futhi ivumela ukukhetha Izinkulumo, i-Siri, Ukuqopha, i-Prompter, ne-Usizo.
Inkinobho emaphakathi iyinkinobho ethi Hlela Speech ehlela inkulumo oyikhethile njengamanje. Ukwakha inkulumo entsha khetha izinkulumo kusilayidi esephaneli elingezansi. Enye inketho yokufaka inkulumo entsha noma yokuhlela neyakudala ukuyala ku-SpeechMaker usebenzisa iSiri ngokushaya inkinobho yemakrofoni eduze kwesikhala sendawo kwikhibhodi ebonakalayo.
Izinkinobho ezimbili ezintsha zivela kwesobunxele isithonjana esibukeka njengezilayidi ezi-3 zemigqa evundlile zivula imenyu eseceleni ebukeka kanjena.
Lezi ezi-5 kuxoxwa ngazo ngezansi.
Iphaneli Yezinkulumo (ngezansi) iyatholakala kumodi yokuhlela. Lapha ungakhetha inkulumo ngokuthepha, ukudala, ukungenisa, ukuthekelisa nokususa inkulumo. Ukwakha, ukungenisa, ukuthekelisa nokususa kuxoxwa ngakho ngezansi.
Dala - ikuvumela ukuthi wakhe inkulumo yakho. Khumbula ukuthi ungashaya ukhiye wokubizela ngakwesobunxele bekhibhodi.
Ngenisa - Izinkulumo ezivela ku-google noma i-dropbox. Amafayela ama-4 angeniswa ngaphandle, umbhalo, i-RTF, i-PDF ne-HTML.
Ungahlukıselana - nge-imeyili noma nge-Facebook. Uma ufuna okuningi usazise.
Susa - khetha bese uthepha ukususa inkulumo.
Ngakwesokudla kwenkulumo ngayinye (ngenhla) thepha inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka (i) ngakwesokudla kwesihloko ngasinye ukuze ubone ibhokisi elingezansi elivumela ukuhlela imininingwane yombhali, isikhulumi, indawo, usuku nesikhathi (ngezansi).
Khetha inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka (i) ngakwesokudla kweDethi / Isikhathi, Isikhathi noma iSiri ukushintsha izilungiselelo zalezo.
Khetha inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka (i) ngakwesokudla kwe-SIRI ukubona ibhokisi elingezansi ukushintsha ulimi, isivinini, iphimbo nevolumu. Lezi zilungiselelo zingenzelwa leyo nkulumo eyodwa noma okuzenzakalelayo kwazo zonke izinkulumo ngokusetha inkinobho ethi 'Okuzenzakalelayo kwakho konke'.
Khetha inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka (i) ngakwesokudla kwe-SIRI ukuhlela izilungiselelo zesikhathi nosuku ngendlela efanayo.
USiri angasethelwa inkulumo eyodwa ebhokisini elingenhla kepha angabizelwa inkulumo evela kusilayidi semenyu futhi.
Ngenisa umsindo ngefomethi ye-mp3 noma ye-.caf.
Thumela okurekhoda umsindo wakho nge-imeyili khetha umsindo bese ucindezela inkinobho yokuthekelisa.
I-Rec noma inkinobho yokuRekhoda ekubukweni okubukhoma nayo izokwenza ukubala phansi bese iqala ukuzenzakalela bese iqopha umsindo. Uma ushaya i-stop izogcina ifayela bese ifaka ibhokisi le-Soundwave ozolidlala, ulithumele noma ulisuse.
Chofoza inkinobho yokurekhoda umsindo ukuqala ukurekhoda nokuzenzakalelayo nge-autoscroll ngasikhathi sinye. Izinkulumo zinesihloko esithi:
Lokhu kusho usuku nesikhathi sokuqala kokuqoshwa. Isandiso .caf yifomethi yefayela lomsindo we-apula.
Izilungiselelo ze-teleprompter zilayida zingena ukusuka kwesobunxele bese zivumela:
Ovundlile - ubukisa umbhalo ngokuvundlile.
Kuqondile - kukhombisa umbhalo ubheke phezulu.
Ukushintsha umbala ogqamile - lowo ngumbala ogqamile wombhalo ngesikhathi sokuzenzakalelayo kokuzenzakalelayo kumodi ebukhoma.
Ekubukeni Okubukhoma uma ushaya inkinobho ye-Autoscroll inkulumo izoqala ukupheqa ngejubane olikhethile. Ukwandisa ukuthepha kwejubane ngakwesokudla. Ukwehlisa ukuthepha ngesivinini ohlangothini lwesobunxele kwesikrini. Lesi sithonjana sizovela esikrinini ukukunikeza impendulo esheshayo yejubane.
Kumodi 'Yokuhlela' ubona imenyu eseceleni ebonwa ngakwesokudla. Le menyu ingahanjiswa iye phezulu noma phansi ngokuhudula imicibisholo ephezulu nangaphansi.
Inkinobho ngayinye engakwesokudla ivula njengedilowa. Kusuka phezulu ngokulandelana kwenkinobho:
Ijubane lokuskrola - thepha bese uhudula ukusetha isivinini sokuskrola okuzenzakalelayo kwenkulumo ku-Live Mode.
Usayizi wefonti - hudula ukusetha usayizi wefonti.
BG - khetha umbala wesizinda.
Ifonti - khetha ifonti.
GM - uhlelo lolimi. Yenza izingxenye zenkulumo zibonakale.
Thepha ngakunye ukuze uzizame. Thepha ukuze uvule, Thepha ukuze uvale.
Izingxenye zenkulumo ziyafundisa futhi zipholile, sicela uqiniseke ukuthi uzama leso sici. Kuhle kakhulu kubafundi.
Okokugcina imicibisholo ephezulu nasezansi ekugcineni ikuvumela ukuthi uthephe futhi uhudule lawo mathuluzi phezulu naphansi ekhasini ukuze ulungise ngendlela othanda ngayo.
Chofoza inkinobho yokungenisa. Chofoza i-Dropbox kanye / noma i-Google Docs ukusetha imininingwane yakho.
Ngaphakathi kweDropbox lokhu kudala ifolda ku:
Izinhlelo zokusebenza: SpeechMaker
Ungangenisa futhi uthumele amafayela kule folda. Hudula umbhalo wakho, i-PDF, i-RTF noma amafayela we-HTML kule folda.
Bese uphinde uye kuphaneli elingezansi uphinde uchofoze ibhokisi lokudonsa bese ukhetha amafayela ofuna ukungenisa.
Ngenisa nge-Google Drayivu
Uma ungene ngemvume ubala wonke amafayela we-.rtf, .pdf, .htm / html kanye ne-.txt kuma-google drive amafolda / amafolda angaphansi. Khetha amafayela ofuna ukungenisa.
Khetha inkulumo bese uthinta inkinobho yokuthekelisa ngenhla ukuze wabelane ngenkulumo nge-imeyili ye-imeyili.
Thinta ohlangothini lwesokunene ukusheshisa i-autoscroll. Bona lolu phawu.
Thinta ohlangothini lwesobunxele ukubambezela i-autoscroll. Bona lolu phawu.
Thinta kabili indawo emaphakathi ukuze ume kancane noma uhambe.
Flick inkulumo phezulu noma phansi ukuhambisa leyo ndlela ngokushesha.
Ncinza ukunciphisa usayizi wefonti.
Sondeza ukuze unwebe usayizi wefonti.
Kukhibhodi enamathiselwe ye-bluetooth
Ukuphenya okhiye phezulu / phansi kuyasebenza ngenkathi uhlela inkulumo.
Skrola iskripthi ungakuvumeli sikusongele - Funda ngokwemvelo. Lungisa ukuskrola okuzenzakalelayo kusivinini sakho sokufunda.
Hambisa, phefumula futhi uphumule futhi ukujabulele ukukhuluma nabantu.
Zijwayeze ukukhuluma kwakho.
Ukukhathazeka nomzwelo kuhle. Lawa ngamandla aphakela inkulumo yakho.
Ukuma komzimba kubalulekile. Sukuma ume uqonde.
Sebenzisa izandla zakho.
Faka izinkomba kusikripthi sakho ukuze uphefumule, ukhombe, uphumule, noma yini ofuna ukuzikhumbuza ngayo lapho unikeza inkulumo.
Q: Abakwa-Teleprompters babiza u- $ 750 nokuningi. Ingabe ikhona indlela eshibhile yokusebenzisa iSpeechMaker njenge-teleprompter?
A: Umbuzo omuhle kakhulu! Kulabo abangayazi i-teleprompter noma i-cue iyithuluzi elisetshenziswa estudiyo sethelevishini esivumela umuntu ukuthi abheke ngqo kukhamera futhi afunde umbhalo oskrolweni esikrinini. Yilokhu ubona umengameli esebenzisa ngakho ukuze akwazi ukukhumbula inkulumo yakhe futhi aqhubeke ebheka izethameli ngamehlo ngaphandle kokubheka phansi amakhadi we-cue. Ukusebenzisa i-teleprompter kungenza i-podcast yakho, umkhiqizo noma enye ividiyo ibukeke inolwazi kakhulu. Manje, noma ngubani angathenga i-teleprompter noma azenzele yona nge-smartphone noma ithebhulethi yakho. Chofoza lapha kokukodwa kwabaningi kwenze ngokwakho (DIY) amavidiyo ngokwenza i-teleprompter yakho.
Q: Ngabe uneziphakamiso zokunciphisa ukunyakaza kwamehlo lapho usebenzisa i-teleprompter?
A: Yebo, kumayelana nebanga ukusuka emehlweni omfundi kuye kwikhamera. Kukhula ibanga ukunyakaza kwamehlo okuncane. Ibanga likhudlwana kukhudlwana isikrini nefonti okudingeka kube yikho. Sebenzisa uhlobo olukhulu lokuthayipha.
Q: Ngiyabona ukuthi umsindo ugcinwa ku-.caf okuyifomethi yefayela lomsindo we-apula. Ngikudlulisa kanjani futhi ngikudlale lokhu kukhompyutha yami ye-Mac / Win?
A: Lokho okukhulunywa ngakho lapha:
Futhi i-google caf kuya ku-mp3 noma i-mp3 kuya ku-caf noma noma yini ukuthola ithuluzi lamahhala lakamuva lokwenza lokho kuguqulwa.
Uma unesiphakamiso noma inkinga sifuna ukuzwa kuwe. Xhumana nathi
Siyabonga ngokusebenzisa iSpeechMaker
Abantu e-plum bayamangalisa
Imininingwane © 2010 - 2017 Plum Amazing, LLC. Wonke Amalungelo Agodliwe. Inqubomgomo Yobumfihlo / Ezomthetho. I-EULA yayo yonke isoftware ilapha.
Izinkulumo eziyi-11 ezidumile zabesifazane kwezobunjiniyela nobuchwepheshe
Izinkulumo eziyi-7 ezikhumbuleka kakhulu zango-2015
Izinkulumo Ezintathu Eziphezulu ZikaSteve
Izinkulumo Ezashintsha Umhlaba
Izinkulumo ezingama-55 Ezinethonya Labantu Bangekhulu Lama-21
Izinkulumo Eziphezulu Eziyi-10 Zokuqalisa
“Uhlelo lokusebenza lwentengo ephansi lwe-SpeechMaker lusiza abasebenzisi ukwenza, ukuhlola, ukuzilolonga, ukurekhoda, kanye nezinkulumo zesikhathi. Kufaka phakathi iqoqo elikhulu lezinkulumo ezidumile, kodwa okubaluleke kakhulu, amathuluzi okuzakhela nokwethula awakho ngendlela efanele. ” - UGraham K. Rodgers, Buyekeza kuma-eXtensions, 8/30/17